Tatitra Netizen: Manamafy Ny Fanarahamaso Vaovao Amin’ny Anaran’ny Fiarovana Nasionaly Ny Manampahefana Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Mey 2019 15:03 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Jona 2016)
Kamerà fanarahamaso natao sary stencil. Sary avy amin'i Paul Lowry tao amin'ny Flickr (CC BY 2.0)
Manome topimaso kely an'ireo fanamby, fandresena ary fironana vao mipongatra amin'ny resaka zo anaty Aterineto manerana ny tany ny Tatitra Netizen an'ny Global Voices Advox.
Mety hikitika mihoatra ny lalàna folo ny andiana fanovàna vaovao ”manohitra ny fampihorohoroana” any Rosia ary hanitatra be ny fahefan'ny Fanjakana amin'ny lafiny fanarahamaso ny zo sivilin'ny olom-pirenena.
Toy ny lazain'ny Meduza, tranonkala tsy miankina mampita vaovao mifantoka amin'i Rosia, ho avelan’ ireo fanovàna ireo ny manampahefana ho afaka ”…hanaisotra amin'ireo Rosiana ny maha-olom-pirenena azy, hanafoana ireo zo amin'ny fivezivezena any ivelany amin'ireo olona fantatra fa meloka tamin'ny famoahana an-tambajotra votoaty ”ratsy” ary hiditra amin'ireo resaka an-tariby sy imailaka rehetra manerana an'i Rosia.”
Mampitombo koa ireo sazy azon'ireo mpampiasa aterineto “mandrisika hetsika fampihorohoroana sy manamarina ny asa fampihorohoroana” ireo fanovàna ireo, mahatonga ny sazy farany henjana indrindra ho tafakatra 5 ka hatramin'ny 7 taona an-tranomaizina amin'ny heloka toy izany. Hanery ireo orinasan'ny fifandraisandavitra sy ireo mpikarakara ny “fizarana vaovao an-tambajotra” – ka isan'izany ny fitorahana blaogy sy ireo tranonkala-na tambajotra sosialy – hitahitry ireo rakitrana antso an-tariby na rakipeo, simaiso, sary, lahatsary ary karazana votoaty hafa an'ny mpanjifa amin'ny endriny hafa nandritra ny enim-bolana teo amin'ny tany Rosiana.
Efa nandalo famakiana voalohany tao amin'ny Duma ireo fanovàna ireo ary efa miandry ny hanekena azy ireo ny ankamaroan'ny olona. Hanan-kery amin'ny volana Jolay 2018 izy ireo.
Tanaty fivoaran-draharaha iray manahirana, nanome hery vaovao ny Roscomnadzor, mpandrindra ny haino aman-jerim-panjakana Rosiana, izay hamela azy hanafoana ireo anaran-tsehatra mampiantrano lahatsary mamoafady momba ny ankizy. Manampy lisitra tsy mitsaha-mitombo amin'ny tombondahiny ivelan'ny fitsarana ananan'ny Roscomnadzor ny fahefana manafoana ireo anaran-tsehatra ao amin'ny .RU na .РФ sy ny sasantsasany ihany koa amin'ireo masoivohom-panjakana Rosiana, ao anatin'izany ny Ministeran'ny Atitany, izay manana ny sata ”masoivoho mahefa”, midika fa afaka ataony ny hanondro votoaty iray ho toy ny mampidi-doza.
Voatafika tao amin'ny tranon'ny ben'ny tanàna tany Makassar, Indonezia ny mpanoratra iray ato amin'ny Global Voices
Tamin'ny 5 Jona 2016, mpanao gazety niomerika roa any Makassar, Indonezia no voatafika rehefa nanatrika hetsika iray tao amin'ny tranon'ny ben'ny tanànan'i Makassar. Nosakanan'ny lehilahy roa nanao fitafy mainty – tsy ilay fitafy mainty mahazatra an'ireo mpiambina tanàna – ireo mpanao gazety ireo, ilay Indoneziana mpanoratra ato amin'ny Global Voices, i Arpan Rachman sy i Icha Lamboge vadiny, ary nangatahana ny karapanondron'izy ireo. Avy eo, nisintona ny fiandain'i Lamboge ny iray tamin'ireo lehilahy ireo. Rehefa niditra an-tsehatra i Rachman ary niezaka ny haka ilay findainy, nasian'ilay lehilahy totohondro tao amin'ny tratrany raha toa ka nanakenda azy kosa ilay lehilahy iray hafa. Efa sitrana soa aman-tsara i Rachman fa samy matahotra amin'ny fiarovana ny ainy izy roa ireo.
Niaraka niasa tamin'ny tantara izay nahiahian'izy ireo ho niteraka ilay tranga ireo mpivady, izay ahitana ny fandrakofana ilay fandroahana faobe niteraka resabe nitranga tao afovoan'i Makassar. Hatramin'ny ora itenenana, trangana fanararaotana 12 natao tamin'ny mpanao gazety no efa voarakitra tao Makassar tamin'ny 2016, araka ny Fikambanan'ireo Mpanao Gazety Tsy Miankina any Makassar.
Mihamarobe ireo Tanzaniana miatrika fanenjehana noho ny Lalànan'ny Heloka an-tserasera
Miatrika telo taona an-tranomaizina ny lehilahy Tanzaniana iray noho ny fanamelohana azy tamin'ny fanompàna ny Filoha John Magufuli tao amin'ny Facebook tamin'ny Martsa 2016. Namoaka fanehoankevitra mikasika ny antso mivantana tsy nampoizina nataon'ny Filoha tamin'ny fandaharam-baovao 360 i Isaac Habakuk Emily, nitsikera azy ho “mpanao teatra ara-politika”. Tamin'ny 22 jona, nampangaina tamin'izany lalàna izany ihany koa ny lehilahy Tanzaniana iray hafa noho ny fanompàna ny filoha, fa tao amin'ny WhatsApp no namoahany ny hafany.
Milaza ireo mpanohitra ilay lalàna mifehy ny heloka an-tserasera fa manome fahefana loatra ny polisy ilay lalàna – tsy misy fanarahamaso mba misy dikany -, mamela azy ireo hisava ny tranon'ireo lazaina fa nandika lalàna, haka ny entany elektronika ary hangataka ny rakitr'izy ireo any amin'ny mpamatsy tolotra an-tambajotra.
‘Ny raharaha nifanolanako tamin'ny Lenovo ao Meksika’
Nameno fanamby iray ilay blaogera Meksikàna sady mpikaroka ara-teknolojika, Jacobo Najera, nifanandrinany tamin'ilay mpanamboatra solosaina Lenovo mikasika ny rindrambaiko fiarovana efa napetrany mialoha ao anatin'ny karazana solosaina finday, Yoga 2 izay manakana ireo mpampiasa tsy hampiditra ny rafitra rindrambaiko maimaimpoana Linux. Nfanamby tamin'ny Lenovo i Najera, teo anoloan'ny Mpampanoa Lalàna Federalin'i Meksika Mikasika ny Fiarovana Ny Mpanjifa, izay nanapa-kevitra ny hanome rariny azy, nilaza fa tsy nambaran'ilay orinasa araka ny tokony ho izy tamin'ireo mpanjifa ny mikasika ireo sakana ara-teknikana ao amin'ilay fitaovana. Mamaritra ny zava-niainany i Najera, tao anaty lahatsoratra iray mifanaraka amin'ny fijerin'ny mpitantara ho an'ny Advox
Tapahan'i Singapaoro ny fidirana amin'ny Aterineto ho an'ireo mpiasam-panjakana
Nanambara ny fikasany hanena ny fidirana amin'ny Aterineto any amin'ireo biraon'ny governemanta ny governemanta Singaporeana, izay antsoin'ny olona sasany ho “fandraràna ny aterineto” tsy hidiran'ireo mpiasam-panjakana. Toa hangataka an'ireo mpiasam-panjakana ny hampiasan'izy ireo fdirana Aterineto voatokana, fa tsy ny solosainany ao amin'ireo biraony, ilay politika raha toa ka mila miditra amin'ny Aterineto izy ireo. Araka ny tomponandraikitra sasany, nezaka fikendrena ny hanatsara ny fiarovana amin'ny cyber any Singapaoro ity politika ity, fa ny sasany kosa namaritra izany ho henjana sy tsy ilaina.
Bilaogera torian'ny Banky Nasionaly Keniàna eny amin'ny fitsaràna
Torian'ny Banky Nasionaly ao Kenya eny anoloan'ny fitsarana ho nanal baraka azy ilay bilaogera, Cyprian Nyakundi , tao anatina andiana lahatsoratra mikasika ny lazaina fa kolikoly misy ao amin'ilay banky. Tao anatin'ny fihainoana voalohany, namoaka didy vonjimaika mandrara an'i Nyakundi tsy hamoaka fanambarana manala baraka an'ilay Banky ny fitsarana.
Resy teny amin'ny fitsaràna tao Etazonia tamin'ny resaka tsy fitanilàn'ny aterineto indostria iray misahana Fifandraisandavitra
Nanamarina feno ireo fepetran'ny tsy fitanilàn”ny tambajotra izay nanitatra ny fanarahamaso federalin'ireo mpamatsy tolotra Aterineto ny fitsarana mpandrava didy ao Etazonia, nandà ny fitoriana avy amin'ireo fikambanan'ny fifandraisandavitra, an-tariby sy tsy mampiasa tariby izay nitady ny hanohitra ilay antsoina hoe Lalànan'ny Aterineto Misokatra. Na teo aza ny fandàvana ny raharahan'izy ireo, andrasan'ny mpitazana hanao fampakrana aeny anarehan'ny Fitsaràna Antampony ilay indostriam-pifandraisandavitra.
#IranVotes: Political Discourse on Iranian Twitter During the 2016 Parliamentary Elections – Ivontoerana Berkman ho an'ny Aterineto sy ny Haino Aman-jery Madinika
Boky torolalana Ho an'ny Fitantanana Ny Aterineto - DW Akademie
Misorata Anarana hahazo ny Tatitra Netizen Amin'ny alalan'ny imailaka
Nandray anjara tamin'ity tatitra ity i Ellery Roberts Biddle, Weiping Li, Tetyana Lockot, Ndesanjo Macha sy i Sarah Myers West.